Wararka - Horumarinta tiknoolajiyadda qolka nadiifta ah
Qolka nadiifka ah waxaa loola jeedaa ka saaridda walxaha, hawo waxyeello leh, bakteeriya iyo wasakhda kale ee hawada gudaheeda meel bannaan, iyo xakamaynta heerkulka gudaha, nadaafadda, cadaadiska gudaha, xawaaraha hawada iyo qaybinta hawada, buuqa, gariirka, nalalka, iyo guurka korontada oo ku jirta baahiyo kala duwan, waxaana la siiyaa qol si gaar ah loo qaabeeyey.
Mabda'a shaqada oo nadiif ah: Hawada, nadiifinta asaasiga ah, qaybta huurka, qaybta kululaynta, qaybta qaboojinta dusha, nadiifinta waxtarka dhexdhexaadka ah soo celiyeyaasha hawada → nadiifinta asaasiga ah waxay ku celiyaan kor
Bartamihii 1960-meeyadii, qolal nadiif ahku soo kordhay qaybaha kala duwan ee warshadaha ee Maraykanka. Kaliya looma adeegsado warshadaha milatariga, laakiin sidoo kale waxaa lagu dallacsiiyay elektiroonigga, optics-ka, dhejiska yar-yar, matoorrada yaryar, filimada sawir-qaadka ah, reagents kiimiko aad u saafi ah iyo qaybaha kale ee warshadaha.
Horumarinta teknolojiyadda iyo horumarinta warshadaha ayaa door aad u muhiim ah ka qaatay kor u qaadista.
Horraantii 1970 -yadii, diiradda dhismaha qol nadiif ah ayaa bilaabatay in loo wareego dhinaca caafimaadka, dawooyinka, cuntada iyo warshadaha biochemical. Marka laga soo tago Mareykanka, waddamada kale ee warshadaha horumarsan, sida Japan, Jarmalka, Ingiriiska, Faransiiska, Switzerland, Midowgii Soofiyeeti ee hore, iyo Netherlands, ayaa iyaguna muhiimad weyn siiyay oo si xoog leh u horumariyay tikniyoolajiyadda nadiifka ah.
Horraantii 1960 -meeyadii waxay ahayd marxaladdii ugu horreysay ee horumarinta teknolojiyadda nadiifka ah ee Shiinaha, qiyaas ahaan toban sano kadib dibedda. Dalka Shiinaha, waxay ahayd waqti aad u adag. Dhinac, waxay ka soo gudubtay saddex sano oo masiibooyin dabiici ah oo aasaaskeedii dhaqaale uu daciif ahaa. Dhinaca kale, xidhiidh toos ah lama lahayn waddammada horumaray xagga sayniska iyo farsamada adduunka mana heli karin xogta sayniska iyo farsamada, xogta iyo muunadaha lagama maarmaanka ah. Xaaladahan adag, iyagoo diiradda saaraya baahiyaha mashiinno sax ah, qalabaynta duullimaadyada iyo warshadaha elektiroonigga, shaqaalaha tikniyoolajiyadda nadiifka ah ee Shiinaha ayaa bilaabay safarkooda ganacsi.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama baahi ah oo ku saabsan qolka nadiifta ah, fadlan nala soo xiriir ， E-mailkayaga: xuebl@tekmax.com.cn Waxaan rajeynayaa inaan kaa maqlo.
Qaboojiyaha Hawada Qolka nadiifka ah, Qolka Nadiifka ah, Sifaynta Unugga Hawada Cusub, Daaqadda Qolka Nadiifinta Qolka, Nidaamka Biyaha Qaboojiyay, Daaqadda Qolka nadiifka ah,